K-Tek Stingray Utility Hip Pack အသစ် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » နယူး K-Tek Stingray Utility ကိုက Hip Pack ကို
နယူး K-Tek Stingray Utility ကိုက Hip Pack ကို 45401 (1) .jpg
နယူး K-Tek Stingray Utility ကိုက Hip Pack ကို
K-Tek အားဖြင့်၎င်း, အသံ Utility ကိုနှင့် Boom လုပ်ငန်းရှင်များများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပထမဦးဆုံးတင်ပါးဆုံရိုး pack ကိုမိတ်ဆက်။ အဆိုပါ Stingray Utility ကိုက Hip Pack ကို2ကျယ်ဝန်းအခန်းတစ် built-in စည်းရုံးရေးမှူးနှင့်အတူတဦးတည်းကိုထောက်ပံ့ပေးနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ, ဆက်စပ်ပစ္စည်း, ကိရိယာများ, မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်အစဉ်အဆက်အဘယ်အရာကိုလက်မှာအနီးကပ်နှင့်တွေ့ပါရန်လွယ်ကူဖြစ်လိုအပ်ကျင်းပရန်သောအရပ်တို့ကိုပေးထားပါတယ်။
ကိုင်တွယ်ရန်အဆင်ပြေတစ်မူထူးခြားတဲ့အပျော့ထောင့်ကွေးဒီဇိုင်းနှင့်အတူ, ဒီစွယ်စုံလေယာဉ်တင်သင်္ဘော Set-အပေါ်နဲ့ off အညီအမျှအသုံးဝင်သည်။ ၎င်း၏ချိန်ညှိကျယ်ပြန့်ထည် waistband နှင့်တေးသံအပြင်ပန်းကနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်အရေအတွက်ဝတ်ဆင်ခြင်းကိုပေးနိုင်ပါတယ်: တစ် Fanny-pack ကို, ဒါမှမဟုတ်ပင်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပခုံးအဖြစ်နေထိုင်-In-ရာအရပျအရွယ်အစားပြောင်းနှင့်ဖြုတ်ပေါင်-သိုင်းကြိုးနှင့်အတူ holster စတိုင်။
နှစ်ဦးအားပုဒ်မလွယ်ကူစွာဘို့ခြုံ-န်းကျင်ဇစ်ကိုဆက်ကပ်။ x10 "ဟုအဆိုပါရှေ့အခန်းတစ်ခုလုံလောက်သော 10 စဉ် / 3cm x ကို 25 စင်တီမီတာ x ကို 25 စင်တီမီတာ" 8 "7 x" အဓိကအခန်းအတိုင်းအတာစင်တီမီတာ x ကို 8.5 စင်တီမီတာ "/ 18 35 x ။ တစ်ခုချင်းစီကို velor တူသောပေါ် မူတည်. အသေးစိတ်အားသာချက်များနှင့်အတူပျော့လိမ္မော်ရောင်နံရံ features များနှင့်အိတ်ကပ်တစ်ဦးအမြင်-မှတစ်ဆင့်ဗီနိုင်းကျောထောက်နောက်ခံကွက်အပိုင်းများနှင့် elasticized ထည် Pouch mesh ။ အဆိုပါလွယ်ကူတဲ့ဆုပ်ကိုင်ဇစ် tabs များအနေဖြင့် elastic tool ကိုစည်းရုံးရေးမှူးမှ, ကအလုပ်သွားဖို့တည်ဆောက်ထားသည်။
အလုပ်-wear တစ်ခုနေ့စဉ်အပိုင်းအစ, အနက်ရောင် KSUHP1 တစ် fit ဖို့လုံလောက်တဲ့ကြီးမားသည် အသံဖုန်းများအတွက် ကိုယ်ပျောက်မှတ်တမ်းတင်ဘို့ MixPro-3 သို့မဟုတ် MixPre-6 ။ အသေးစား elastic Pouch အတွင်း Stingray KSLP1 Lav Pouch fit မှသုံးနိုင်နှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုး, Adapter က, တိပ်ခွေ, ခြံများနှင့်သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများနှင့်တူနေရာလေးကိုကုန်စည်ဟာ host နေကြသည်။ အဆိုပါသံကိုဌာနရုံက start ဖြစ်ပါသည်: အဆိုပါ Utility ကိုက Hip Pack ကိုအလင်းရောင်, ချုပ်ကိုင်ထား, ကင်မရာ, တက်အောင်, ဆဲဓာတ်ပုံနှင့်ဇာတ်ညွှန်းကဲ့သို့အခြား On-set ကိုဌာနဆိုင်ရာများတွင်အမျိုးမျိုးသောအခန်းကဏ္ဍလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Stingray Utility ကိုက Hip Pack ကိုဖွင့် 14 အောင်စ / 390 ဂရမ်အလေးချိန်။ $ 123.50 မှာစျေးနှုန်းကြောင့်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ် K-Tek ကုန်သည်တွေကနေရရှိနိုင်ပါသည်။
K-Tek Stingray Utility ကိုက Hip Pack ကိုလမ်းလျှောက်
နယူး K-Tek Stingray Utility ကိုက Hip Pack ကို 45454 (2) .jpg
နယူး K-Tek Stingray Utility ကိုက Hip Pack ကို 47504 (1) .jpg
နယူး K-Tek Stingray Utility ကိုက Hip Pack ကို 45445 (1) .jpg
နယူး K-Tek Stingray Utility ကိုက Hip Pack ကို 45406 (1) .jpg
Manfred N ကို Klemme အားဖြင့် 1996 အတွက်၎င်း၏တည်ထောင်ကတည်းက K-Tek နည်းနည်းချောမွေ့အသံအင်ဂျင်နီယာနှင့်စန်းအော်ပရေတာရဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အစေရန်ဆန်းသစ်ရေးကိရိယာများနှင့်အတူအသံကမ္ဘာကြီးကိုထောက်ခံခဲ့သည်။ အသံများအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူ Manfred ရဲ့ပထမဆုံးမစ်ရှင်အမေရိကန်တစ်လိုင်းကိုဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပေါ့ပါးခိုင်ခံ့နှင့်ရှေးရှေးအသိပေးစာကိုယူကြောင်းဖော်ရွေဒီတော့အသံဖြစ်ကြောင်းစန်းထမ်းဘိုးတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ပြည့်စုံမစ်ရှင်: 1999 K-Tek အတွက် Klassic Boom ဝင်ရိုးစွန်းများအတွက် Motion Picture ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံအကယ်ဒမီကနေနည်းပညာဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှစ. K-Tek များစွာသောအခြားဆုရရှိထားပြီးပါပြီနှင့်အပါအဝင်လှပသောဒီဇိုင်းနှင့်လှလှပပဆောက်လုပ်ထား, အသံ-ဗဟိုပြုထုတ်ကုန်အောင်၏ဂုဏ်သတင်း: Klassic & Avalon ဖိုက်နှင့်လူမီနီယံစန်းထမ်းဘိုး, ထိတ်လန့်တောင်ပေါ်, ငါးမန်းအင်တင်နာတောင်ပေါ်မှာများနှင့်မပီမသ & Topper windscreens ။ K-Tek ရဲ့ကြီးထွားလာ Stingray လိုင်းအသံရောနှောအိတ်, ခါးလောက်ခါးပတ်, တစ်ဦးကိုပြန်လည်-saving အသံကကြိုးတန်ဆာဆင်ပေါင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းအိတ်နှင့်အိတ်များနှင့်အိတ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ သွားရောက်ကြည့်ရှု: www.ktekpro.com.
SmallHD သည်ကိုးကားစရာအဆင့် 4K OLED ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် - ဇူလိုင်လ 30, 2020
SmallHD သည်RED® KOMODO ™အတွက် Focus Pro SeriesRugged On-Camera Monitoring and Control စတင်ခဲ့သည် - ဇူလိုင်လ 16, 2020
သစ်သားကင်မရာသည်RED® KOMODO ™အတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုကြေငြာခဲ့သည် - ဇူလိုင်လ 16, 2020
ယခင်: နယူး K-Tek Stingray Utility ကိုက Hip Pack ကို
နောက်တစ်ခု: ထုတ်လုပ်မှုပံ့ပိုးမှုအင်ဂျင်နီယာ / ဒီဇိုင်းနှင့်ဗီဒီယို